Vono olona tany Andapa :: Tovovavy, 16 taona, hita faty voatsindron’antsy • AoRaha
Vono olona tany Andapa Tovovavy, 16 taona, hita faty voatsindron’antsy
Ahiana fatratra ho nisy namono ny tovovavy iray, enina ambin’ny folo taona, hita faty tany Antangena Andapa, afak’omaly maraina. Nahitana tsatok’antsy roa ny vatany. Efa manao fanadi­hadiana ny mpitandro filaminana any an-toerana. Natao famotorana sady notazo­­nin’ny polisy ny lehilahy iray sakaizan’io tovovavy namoy ny ainy io.
Tamin’ny alin’ny talata no nahafatesan’ilay tovovavy. Hita teo anelakelan-trano ny vatana mangatsiakany, ny maraina. Nambaran’ny polisy nanao ny angom-baovao fa nantsoin’ ny sakazainy nasainy nankany an-tranony io tovovavy io. Teny an-dalana izy no tra-doza novonoin’olon-tsy fantatra. Notazonina avy ha­trany ilay tovolahy sakaizany ho fiarovana ny ainy amin’ny mety hisian’ny hatezeram-bahoaka.
Nambaran’ny mpitandro filaminana any an-toerana fa mateti-pitranga ny vono olona tahaka izao, tato ho ato, indrindra any amin’ny
toerana ambanivohitr’Andapa. Resaka tsindron’ antsy no tena misy. Niara-nivory ny tompon’andraiki-panjakana tany an-toerana, afak’omaly, nandinika ny fepetra raisina ho fisorohana ny loza tahaka izao.
“Anisan’ny tapaka ta­min’ ny fivoriana ny fanamafisana ny fisafoana sy ny fametrahana ny andrimasom-pokonolona, fisavana ny karapanondron’ireo olona mivezivezy amin’ny alina”, hoy hatrany ny polisy.
Velirano hoan’i fanabeazana Hizara Rakibolana iray tapitrisa isan-taona ny fanjakana
Fisorohana voina faobe Notsindronina ireo olona sivy amby fitopolo nihinana hen’omby matin’ny haromotana
Fakana an-keriny Naiditra am-ponja ny zandary fanintelony voarohirohy
Loza tany Antsirabe :: Zaza, 12 taona, maty nofaohin’ny fiara
Fitsirihana teknika :: Lavina ny fiaran’ny Zandarimaria miisa dimy
Fiitaran’ny covid-19 Tafakatra valo ireo faritra tratran’ny coronavirus